OTU ESI AGBANWE AHA AHA NA STEAM - STEAM - 2019
Gbanwe aha aha na Steam
Ọ na-emekarị na mgbe nhazi video na Sony Vegas, ọ na-amalite ịmalite ọtụtụ ohere. Na obere vidiyo, nke a nwere ike ọ gaghị adị anya, ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ dị ukwuu, mgbe ahụ, i kwesịrị iche echiche banyere ole video gị ga-atụle. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya iji belata ntaneti.
Kedu otu esi belata onyonyo na Sony Vegas?
1. Mgbe ị kwusịrị ọrụ na vidiyo, gaa na "File" menu na "Visualize as ..." ihe. Wee họrọ usoro kachasị mma (nhọrọ kasị mma bụ Internet HD 720).
2. Ugbu a pịa bọtịnụ "Dezie Template ...". Ị ga-ahụ windo na ntọala ndị ọzọ. Na kọlụm ikpeazụ, "Ọnọdụ mkpuchi", họrọ ihe "Jiri anya hụ naanị iji CPU." Ya mere, kaadị vidiyo adịghị etinye aka na nhazi faịlụ ahụ ma nge vidiyo ga-adịtụ ntakịrị.
Enweghị nsụgharị Russian ziri ezi nke Sony Vegas. Ya mere, usoro a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị nwere nsụgharị Russian nke nchịkọta vidiyo.
Nke a bụ ụzọ dị mfe iji mpikota onyonyo. N'ezie, e nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ, dị ka ịkụda bitrate, belata mkpebi ma ọ bụ ịgbanwere vidiyo na mmemme ndị ọzọ. Anyị weere usoro nke na-enye gị ohere ịdee vidio na-enweghị ọdịda na mma ma jiri naanị Sony Vegas.